Daawo:- Shacab caraysan oo taalo ku dhegnaa sawirka Farmaajo oo dhulka dhigay - Awdinle Online
Daawo:- Shacab caraysan oo taalo ku dhegnaa sawirka Farmaajo oo dhulka dhigay
Dibad-baxyada ka socda magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa kasii daray, ayada oo ay korortay carrada ka dhalatay dil uu askari ka tirsan ciidamada dowladda xalay u gaystay laba qof oo shacab ah.
Dadkan ayaa waxaa loo dilay inay jebiyeen bandowga ay dowladda saartay Muqdisho, oo ka billaabanaya 7-da habeennimo.
Carrada ayaa waxa hadda u muuqataa inay ku wajahan tahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana la arkayey dibad-baxayaal ku sugan Barta wareegsan (roundabout) ee degmada Shingaani, oo soo ridaya sawirka Madaxweyne Farmaajo ee halkaas ku dheggan.
Dadkaan careysan ayaa sidoo kale ku dhawaaqayey erayo ka dhan ah madaxweynaha iyo ciidamada Dowladda, gaar ahaan kuwa booliska.
Carrada ka muuqata shacabka Muqdisho ayaa ah mid aan horey loo arag, waxaana laga cabsi qabaa inay xaaladda faraha kasii baxdo, haddii aanay dowladda xal deg deg ah la iman.
Allaha u naxariistee labada marxuum ee la dilay, ee dhaliyey kacdoonka shacabka Muqdisho, ayaa kala ahaa. 1- Marxuumada Madiino Cabdullaahi Cabdi ina Faadumo Xuseen Maxamed 17 jir ah ku dhalatay Xamar daganeyd Boondhere. 2 – Marxuun Xasan Cali Cadaawe ina Faadumo Cali Xasan 24 jir ah ku dhashay Xamar daganaa Boondheere.
Taliska Ciidanka Booliska Somaliya ayaa sheegay in gacanta lagu soo dhigay D/Le booliis 26869 Xasan Aadan Xasan 24 jir, kaasi oo hadda ku jira gacanta Hay’addaha Garsoorka dalka.
Fariinta kusocota Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajo waxay tahay waa:-1-In gacan bir aha lagu qabtaa ciidanka waraabaha aha ee dadka sida badheedhka aha u dilaya.2-Waa in bandowga saaran Magaaladda Xamar laga qaadaa oo ilaa 9:00 habeenimo lagaarsiiyaa.3-Dadka waa in loo abuuroo rajo, lagana gudbaa hadalka caadifadda aha .4-Dadka sida sharci darada aha lacagta baadda aha uga qaadaya dadka muruqmaalka aha,marka ay marayaan wadooyinka go,an ..waa in talaabo sharci aha laga qaadaa.5-Wadooyinka sida guud u xiran waa in xal loo helaa macquul aha.6-Dhaqanka ciidanka ay kula dhaqmayaan shacabka waa in wax laga badalo7-Cadaadisaka lagu hayo dhaalinyarada Muqdisho waa in lajoojiyaa..Waxa hadda socoda wax loo dulqaadan Kara ma aha runtii.Abdirahman Sahal Yusuf25-4-2020
Posted by Abdirahman Sahal Yusuf on Saturday, April 25, 2020
Previous articleHirshabelle: Xildhibaano Mooshin Ka gudbiyay Sheekh Cismaan Barre .
Next articleFatahaad Ka Dhashay Webiga Jubba Ee Baardheere